Indlela ukubaleka imicabango emibi? Lona umbuzo abantu abaningi babe. Yileyo indlela kubantu akanayo ukulawula imicabango yakho. Eza uhambe bebodwa, zenza abantu babe bewuthanda, lingakwenza ukhathazeke. Uma ikhanda kwafika imicabango emibi, bese balahle kubo akunakwenzeka. Omunye ngemva komunye, kukhona agumenti entsha negative, uyakwazi ukushayela umuntu wacindezeleka.
Kusukela abaleke imicabango emibi? Ukuze uzivikele lwesigameko emibi enjalo, kubalulekile ukwazi ezimbalwa nezincomo ezivela kwengqondo. Ulandela iseluleko ochwepheshe, ungakwazi bayakhohlwa imicabango emibi, ukuze bazivikele imiphumela emibi.
Okokuqala, izazi zokusebenza kwengqondo afanelekayo Kunconywa ukuzama ukuba uzazi kahle wena, ukuba ngqo, empeleni ngicabanga izinto ezidumazayo. Phela imicabango emibi akhiwa ngokungazi, lapho imali ezinye izinkinga ezingaxazululeki futhi imibuzo engqondweni. Ngakho-ke, kufanele sizame ukuqonda imininingwane wena zama ukuthola umnyombo wenkinga, ukubuyela ngokomzwelo wemvelo ukuze afinyelele eqophelweni lapho kwakukhona isimo ukuthi wayithukuthelisa ukuvela okwalandela imibono ezimbi. Ukuze wenze lokhu kulula ukwenza, udinga ukuba bagxile imicabango ukugeleza bese uzama ukuhlanganisa kubo enesihloko esisodwa.
Lapho isimo uzokwazi khumbula, kufanele ucabange okwamanje, okuyinto kwaba isizathu okwengeziwe ukubuya engqondo ukuze le nkinga. Kuphela ukuqonda okushiwo inkinga, umuntu uzokwazi ukuyixazulula, futhi ngenxa yalokho ukuqeda imicabango emibi. Ngokwesibonelo, kungase kube nohlobo oluthile isenzo esibi noma ibinzana okungalungile uzwakalise. Isikhathi esining impela umuntu okunzima ukuyiqonda inkinga, ngoba umthombo nemicabango engakhi nje selikhohliwe. Nokho, it is imali ekhanda iqala ukuyithukuthelisa ingqondo enganakile okubi, imicabango esindayo. Ezimweni ezinjalo, ochwepheshe ukweluleka kahle zama ukukhumbula zonke izinto, imishwana nezenzo phezu isinsuku.
Daily sinqwamana nabantu kahle ivela ezungeze, umzimba uqala ukujwayela yokukhiqizela imizwa kakhulu futhi okungekuhle kakhudlwana. Njengomthetho, umuntu ngokwakhe akazi lutho kukhona zanqwabelana imicabango engakhi. Kuphela uma enganakile fly ukucabanga yebuhlungu, kulandele Neyesibili iqaphela kube sezingeni engaphathekile yayo noma uthukuthele. Nokho, ukuyeka ukugeleza imicabango sukela asekhanda lakhe njalo agcwaliswa zonke izinkumbulo ezintsha, isivele nzima kakhulu. Shono ngisho endulo bathi imicabango yami ngeke kuqhathaniswe, lutho eziphathekayo. Ngemva kokucabangisisa ngakho, owazalwa ikhanda ngesivinini sombani, cishe akunakwenzeka ukuba ayeke, isifiso nje uzwakalise.
Ngo isigqi olufanayo lomsebenzi kanye Imicabango yabantu. Amabili ikhono ohlangene emqondweni, ezifana emcabangweni umcabango wenza izinto nje emangalisayo nobuchopho bomuntu. Ngokwesibonelo, ethula sezulu esibi, eguqa emoyeni izihlahla futhi kushiya awela emhlabathini, kunzima kakhulu ukuthola enganakile ngokushesha ukudweba sezulu emangalisayo. Njengoba nje umzimba womuntu iyaphendula, emelela olwandle oluthukuthele noma ukusiwa le nale pendulum clock. Ngisho bagxila kakhulu, kunzima ukuthola indoda ethulwa ushintsho isithombe. Nokho, ukwazi okhonzile futhi ufunde ukulawula ukugeleza imicabango Kusengenzeka.
Indlela ukubaleka imicabango emibi? Lapho umuntu Useqala ukucabanga into engeyinhle, masinyane kufanele azame ukushintsha.
Kunconywa ukukhumbula bajabule kakhulu, isikhashana onamileyo wokuphila, ihlaya ozithandayo, umusho, noma ubukele funny movie (isibonelo, "groundhog Day," "Ngaphakathi Ngithathe Dancing", "Omakhelwane. On the warpath-2" "simpleton" "Ngakunye Man Out"). ukulondolozwa Ngakho sokucindezeleka inombolo nenqwaba yabantu. The main into - isikhathi thikazisa imicabango engalungile, ukuze kuqedwe kubo. Kulula kakhulu yokuxazulula le nkinga, uma kusungulwa, kuka ukuzama ukuqeda imiphumela ekuhlushweni kwansuku nokucabanga ngendlela ephambene.
Kusukela abaleke imicabango emibi? Yinye indlela ngaphezulu. Kulokhu, umuntu kudingeka uthole ibhizinisi okudinga ukuba agxilise ingqondo esiphezulu. Lokhu kungaba wokuzilibazisa ozithandayo noma, Ngakolunye uhlangothi, umsebenzi onzima kakhulu edinga ukugxilisa ingqondo ngenhliziyo yonke. Uma uthando okunjalo ukuba wathola, imicabango emibi ngokwabo ukubohla ubala. indawo yabo iyothathwa ukucabanga nemibono ngesihloko, lapho umuntu umshado.
Yikuphi ukukhetha abawujabulela? Ngokwesibonelo, kubalulekile ukuba sizame ukwenza kanjalo puzzle, okuyizinto wokuzilibazisa abantu abaningi, noma uqale ukuxazulula puzzle eziyinselele. La makilasi bengeke umthwalo. Kodwa kakhulu athikanyezwe imicabango emibi. Futhi, ochwepheshe ukweluleka abantu nsuku zonke ukuphinda izimpumelelo zabo impumelelo, ukucabanga mayelana nekubaluleka kwalo emphakathini. Phela, kusukela ukungalethembi kukhona babenakho ukwesaba, okuyinto kuphakamisa ukubukeka imicabango engakhi.
Indlela shift ukunakwa? Kukhona empeleni kuyindlela evumelekile futhi kulula ngempela zinikeza amacebiso amaningi okudlula engqondweni yakhe, nokumphoqelela ukubaleka imicabango emibi. Zonke lokho okulindeleke kumuntu kulesi simo - kungcono umcabango omuhle futhi ikhono ukuhleka. Ngakho, uvale emehlo, kufanele ukuthi wena ulethe zonke izinkinga zabo into encane ezingasho lutho, ngisho ezihlekisayo.
Ngokwesibonelo, kungase kube ezinye izidalwa ezincane kusukela opopayi noma izinambuzane nje encane. Yona uqobo njengeNdodana umuntu kumele afake omkhulu ibhola egqamile, kusuka lapho lusuka ukufudumala nokukhanya. bayakwazisa kuphela ukubaluleka kwalo eqaphela ukuthi mncane kangakanani ukubukeka okungekuhle imicabango, ungakwazi balahle kubo kanye qha kwenela. I Kungashiwo okufanayo mayelana nokwesaba. Uma umuntu has a nhlobo into ethile, kufanele wenze kubukeke into noma isimo, nje ungeza kancane abamahlaya. Ngokwesibonelo, uma umuntu ukwesatshwa samanje nomqashi wakho, kungani ungazami ngokwengqondo ekhanda lakhe iwigi funny noma izingubo engenangqondo? Sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi uhleko bangempela uyakwazi ukuxosha kude noma yimuphi, ngisho ukwesaba esilawulayo kakhulu.
Tune zibe omuhle
Ngaphezu kwalokho kukhona indlela ephumelelayo? Isimo ezintweni ezakhayo! Okusho ukuthi, uma umuntu has nemicabango engakhi, kufanele ufune ezicini ezinhle isimo. Ngokuvamile, abantu abaphethwe negalelo unomphela sengqondo esibi akho, kufanele sizame ukuba babe zinikeza nethemba kakhudlwana. Khona-ke, e-ukucabanga okubi kakhulu ilula ngempela ukuthola isikhathi kancane ezinhle, nokuthi kuyoba nensindiso.
Ngokwesibonelo, lenqwaba abantu abahlupha nsuku ngokwabo kubonisa ukuba kwabo phansi. Ngokwesibonelo, abaningi abaneliswa ukuma, ukulolonga umzimba, ukubukeka, isimo sengqondo emphakathini nokunye. Abantu abanjalo belulekwa ukuba bazame ukuthola izici zayo esihle, okuyinto ukudala bangobani. Uma ngokungazelelwe ukukwenza ngokwakho kungasebenzi, ungakwazi ukucela ukusizwa umndeni nabangane. Ngandlela-thile kakade ncamashi, ngenxa ezinye izimfanelo nezici bekhulumisana futhi ngenze abangane nomuntu. Kungcono ukubuza ngamunye wabo ukwenza uhlu izici okuyiwona bawa indoda okungavikelekile yena. Qiniseka ukukhumbula zonke izici kwakho kukuhle futhi uhlale nsuku zonke okumele siziqhenye ngayo kubo. Khona-ke zonke nemicabango engakhi, eyabonakala ku ngemuva ukungaqiniseki ukuthi angaba ubuntu babo, walahlekelwa bebodwa.
Indlela yokubhekana ucasukile? Lokho nemicabango engakhi awaveli ekhanda, kufanele ehlukahlukene ukuphila kwakho, ukugcwalisa zonke izinhlobo imisebenzi ezithakazelisayo nemizwelo ezimibalabala. Ngokwesibonelo, ngokuvamile ukuya ebhayisikobho, ukubukela funny amabhayisikobho, khona amakilabhu, zokuhambela ezahlukene izivakashi uhambo nokunye.
Kufanele uhlale kude abantu, ibakhathaze, futhi, Ngakolunye uhlangothi, ukuba bajwayelane nabantu abasenkonzweni ayakwazi ukujabulisa futhi unike ajabule.
Ngokulandela lokhu amathiphu alula bengqondo, indoda nje kukodwa kungaba balahle imicabango emibi. Khumbula ukuthi isimo sengqondo esiqondile kwi - kungcono ukuthi into ebaluleke kakhulu ekulweni okungekuhle. Futhi emva kwesikhashana yokucabanga nje anyamalale isikhathi esithile, futhi sekulahlekile. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ke uyokwazi ukubona indlela ukuphila enhle ngokwakhe.
Okubona efisa ukufeza iphupho lakhe
Yini lokushisa ukumelana izithombo utamatisi in zokugcina, e ekhanyayo, emphemeni, ngaphansi ikhava impahla e greenhouse?